Galatni fi kabajni isaaf haa tauutii duaa Gooftaa keenya Iyyesuus kiristoosiin booda fannoon malattoo yakkaa,abarsaa tauu isaa hafee mallattoo bilisummaa, asxa jireenyaa fi nageenyaa tae. Fannoon mallattoo faayinaa tauun isaa kan itti mirkanaae kakuuu haaraatti dhiiga Gooftaa keenyaan biyyi lafaa yommuu qulqullaa'ee duuti bara baraa barbadaaee yeroo ilmi namaa nageenyaa fi jireenya argateeti dha. Kanaafi yeroo hunda wayita kadhannaa gaggeessinu Addunyaa hundumaa fayyisuuf jedhee fannoo Gooftaan keenya IIyyesuus kiristoos irratti fannifameef ni sagadna,Fannoonsaa hunma keenya, humni keenya fannoo isaati, fannoon furaa keenya dha, fannoon isaa fayyisaa lubbuu keenyatti, warri yihuudoota isa ganu nuti garuu itti amanna, warri itti amannus fannichaan ni fayyina, fayyineerras kan jennu. Sababa mukaan duuti gara addunyaatti seene, sababa fannoo kiristoosiin jireenyi gara addunyaa dhufe. Sababa mukaan wanjoon garbuummaa dhala addam irratti feame, sababa fannoo kiristoosiin wanjoo garbummaa san nurraa cabe. Muka seexanni Addaamii fi ijoollee Addaamii ittiin reebaa tureen hara immoo fannoo kiristoosin ijoolleen Adaam seexana reebna, kanaafuu fannoon humna keenya, fannoon furaa keenya. Kanaaf yeroo dalagaa dalagnu mara, yeroo soorachuuf jennu, erga sooratnee booda, yeroo baanu, yeroo gallu, yeroo qoannu yeroo qoannee xumurru, hojii kami iyyu yeroo eegalluuf jennu fi yeroo xumuruu yeroo maraa malattoo fannoo Gooftaa keenyaan mallatteefanna.
Ayyaannii fannoo yeroo hundaa fulbanaa 17 akka seera M/A/O/T/I haala hoaan kabajamee oola. Waaee kabaja faannoo Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo kaasnu akka abbootiin nu barsiisanitti fannoon Gooftaan kenyaa irratti fannifame raajiiwwan heddu waan taasisuu eegaleef kiristaanota biratti kabajaa guddaa, Yihuudota biratti garuu inaaffaa waan uumeef akkasumas namootni raajii fannoo isaa arganii akka hin fayyineef jecha, yihuudotni fannoo kiristoos dhoksuuf/balleessuuf jecha waggoota 300 oliif naannoo Iyyerusaalemitti awwaalanii turani. Labsii baasuun namnii martuu gataa mana isaa irrratti akka gatu taasisan. Balfaan irratti tuulamuun gaara guddaa tae. Fannoo yakkamtoota lamaan mirgaa fi bitaa isaatti fannifaman itti dabaluun akka bakki isaa hin mul'anneef jecha tulluu walfakkaatoo sadii keessaa isa tokko keessatti awwaalani. Badii duraan balleessaniif gaabbii galuu osoo qabanii cubbuu irratti cubbuu hojjechaa turani. Waaee fannoo kiristoos nama jalaa dhoksuu, dagachiisuu hedani. Haa tau malee kan dhokatee hunda kan argu, kan dagatame kan nama yaadachiisu waaqayyo guyyaan fannoon isaa itti argamu ni gae. Waaqayyo nama mootii amantaaf quuqamu Qosxaanxiinos kaase. Jaalalli fannoo kiristoosis laphee keessa bule. Bara 326 BA haati mootii Qosxaanxiiniyoos mootittii Illeeniin nama seenaa beeku fi umurii dheeraa qabu Kiraakos kan jedhamu, Fulbaana 16 damaraa(mukaa jidhaa aaruu dandau) dhaabde. Damaraa (muka jidhaa walitti qabuun erga dhaabdee booda, ixaana itti naquun yoo gubduu/aarsitu/, aarri damaraa sanaa tulluu fannoon Gooftaa keessatti awwaalame irratti boqatee, ni sagade. Qulqullichi daawwitis bakkee miilli waaqayyoo dhaabateetti ni jilbeefanna akkuma jedhu, ( Fars. 132:7)aarri damaraa fannoo Waaqayyoof jilbeefatee, bakkee fannoon jirus Mootiitti Illeeniitti agarsise. Haaluma kanaan Fuulbana 17 qotuu eegalamee, Bitootessa 10 akka fedha isaatti fannoon Gooftaa argame. Ifni fannoo isaas addunyaa guute, fannoo Waaqayyos akkuma duraanii raajii argisiisuu, dua kaasuu eegale. Kanaaf nuyis Fulbaana 16, guyyaa itti manneen amantaa mootiittiin Illeenii Iyyerusaalemitti dhaabsifte guyyaa itti eebifamaan, guyyaa damaraan /aarri/ bakka fannoo Gooftaa jiru agarsisee, fulbaana 17 guyyaa itti qotuun eegalaman fi guyyaa kabaja mana isaa fi galatoo sababeeffachuun ni kabajna. Guyyaan fannoon Gooftaa qotamee argame Bitootessa 10, yoo tau illee guyyaan kun yeroo maraa soomii Gooftaa waan tauf sooma Gooftaa keessa gammachuu taasisuun dhorkamaa sababa waan taeef kabaajni ayyaana fannoo Gooftaa Fulbaana 17 akka tauu abbootiin seera tumaniiru.